मुख्य खबर | गृहपृष्ठ | Page 3
वैशाख १०, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारको विकास योजनामा सत्तासीन दलका ‘ठेकेदार’ प्रदेशसभा सदस्यले व्यवसायिक दुनो सो...
कर्जाको ब्याजदर नघट्ने संकेत
काठमाडौं । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) बढेको स्थितिमा पनि कर्जा ब्याजदर अहिलेभन्दा धेरै नघट्ने संकेत देखिए...
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को वित्तीय अवस्था केलाउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम...
एनसेल लाभकर विवाद : सरकारले गैरकानूनी कर लगाएको दाबी गर्दै रीट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश र कानून विपरीत आफूलाई ठूला करदाता कार्यालयले रू. ३९ अर्बभन्दा बढी कर...
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । सोमवारदेखि सर्वसाधारणका लागि विक्री खुला गरेको गणपति माईक्रोफाइनान्सको आईपीओमा पहिलो...
वैशाख ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्सेमा करेक्शन भएको छ । कारोबार भएको तेस्रो घण्टासम्म बढेको परिसुचक १ हजार २...
आईसीपीबाट यात्रु आवागमन अझै अनिश्चित, अत्याधुनिक संरचना किन प्रयोगविहीन ?
वैशाख ८, वीरगञ्ज । सञ्चालनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट यात्रु र अस्थायी रुप...
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १६:२८ मुख्य खबर, लगानी
वैशाख ६, काठमाडौं (अस) । शुक्रवारदेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागित देखिएको छ । विक्री खुला भएको पहिलो दिनमै सा...	बिस्तृतमा
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०७:२५ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लाग...	बिस्तृतमा
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:५९ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचओटा विदेशी कम्पनीलाई बयानका लागि दोस्रो पटक बोलाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार को...	बिस्तृतमा
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:५३ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको आधार दर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर नघटेको उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएको गुनासो सत्य भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको...	बिस्तृतमा
on: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १७:१४ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
वैशाख ५, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक १५ दशमलव २२ अंकले बढेर १ हजार २३२ दशमलव २६ विन्दुमा बन्द भएको छ । नयाँ वर्ष लागेदेखि निरन्तर बढेको नेप्से एक सातामा ४८ दशमलव २४ अंकल...	बिस्तृतमा
on: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १६:२९ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण निर्धारित समयभन्दा ६ महीनाअघि नै सकिने भएको छ । २०७८ साउन मध्य (सन् २०२१ जुलाई) सम्ममा उक्त विमानस्थल निर्माण सक्नेगर...	बिस्तृतमा
on: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १४:५४ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा परेका पाँचओटै आवेदन रद्द गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सबै आवेदन रद्द गरी नेपालको बजार सुहाउँदा दु...	बिस्तृतमा
on: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार १४:५० मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । सरकारले विकास खर्चमा चुस्तता देखाउन संविधानमै उल्लेख गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गर्‍यो । तर, खर्च गर्ने शैलीमा भने कुनै सुधार नहुँदा त्यस अघिकै प्रचलन कायम रहेको सरका...	बिस्तृतमा